Umaki: amavidiyo wokufinyelela okuthengiswayo | Martech Zone
Umaka: amavidiyo wokufinyelela okuthengiswayo
ULwesibili, May 18, 2021 ULwesibili, May 18, 2021 UDavid Wachs
Ukubhala izincwadi zebhizinisi kungumqondo osuka emuva kokwedlule. Ngalezo zikhathi, izincwadi zokuthengisa ngokomzimba beziwumkhuba obekuhloswe ngawo ukufaka esikhundleni sabathengisi bendlu ngendlu nezinkundla zabo. Izikhathi zanamuhla zidinga izindlela zesimanje (bheka nje izinguquko ekubonisweni kokukhangisa) nokubhala izincwadi zokuthengisa zebhizinisi akunjalo. Eminye imigomo ejwayelekile ephathelene nefomu nezinto zencwadi enhle yokuthengisa isasebenza. Lokho kusho, ukwakheka nobude bencwadi yakho yebhizinisi kuya ngokuthi